Famerenana sy fanamarihana momba ny Pandemocracia nataon'i Daniel Innerarity
firosoana >> boky >> Pandemokrasia avy amin'i Daniel Innerarity
Ny lahatsoratra dia mifantoka amin'ny fitantanana ny areti-mandringana sy politika. Ny zava-drehetra dia mihodina amin'ny fahasarotan'ny fitantanana ny areti-mandringana amin'ny faritra sy scenario samihafa. Raha tsy misy ny fizahan-tavan'olona politika, manintona ny antonony sy ny fifanakalozan-kevitra eo amin'ny roa tonta, ny fiaraha-miasa sy ny kolontsaina ary tsy eo amin'ny firenena ihany fa koa manerantany.
Izy io dia fofonaina rivotra madio, antso ho an'ny saina mahazatra. Amin'ny lafiny iray, manokatra ny masontsika amin'ny fahasarotana mitranga amin'ny fitantanana areti-mifindra
Ny toko voalohany niresahany ny fahasarotan'ny valanaretina, manatrika teoria momba ny rafitra sarotra misy dinika tsy mitongilana, izay tsy ahafahantsika mamantatra mialoha izay hitranga. Ary raha tsy ampy ny fiheverantsika sy ny saintsika mahazatra hiatrehana ilay toe-javatra.
Ity karazana rafitra hazavainy amin'ny boky hafa ity Teôria demaokrasia sarotra
Hevitra iray tonga tao an-tsaiko ary novakiako tato ho ato ny fampiasana ny faharanitan-tsaina artifisialy ho fanatsarana ny rafitra sarotra. Miresaka fanapahan-kevitra izay misy tombontsoa mifanipaka maro aho ary tsy ahafahan'ny olombelona mandray fanapahan-kevitra tsara indrindra. Hatao hampiharina ve izy ireo? Tena hahomby ve izy ireo sa hiaraka amin'ny fitongilanana izay hitarika antsika amin'ny karazana olana hafa?
Ny boky iray manontolo dia mihodinkodina manodidina ny olana rehefa manapa-kevitra. Rafitra saro-pantarina loatra izay manelingelina ny tsirairay, na amin'ny sehatra toy ny siansa, toekarena ary fahasalamana, na amin'ny tombontsoana samihafa ao amin'ny vondrona taranaka.
Ny lafiny mahaliana amin'ny asa dia
Tsy fotoanan'ny mpitondra lehibe izao, fa ho an'ny fandaminana, ny protokolota ary ny paikady dia zava-dehibe ny fitantanana iraisana. Amin'ny fotoanan'ny loza lehibe no angatahinay ny fanjakana mba hiditra an-tsehatra amin'ny fanapahan-kevitra tsara indrindra sy ny fotodrafitrasa tsara indrindra ary ny asam-panjakana. Io koa rehefa tena hita ny lesoka sy ny tena toetrany.
Ireo no krizy averina manombana ny fiarahamonina manerantany. Tsapanay ny fifandraisan'ny firenena hafa amin'ny sehatra rehetra ary ny làlana hivoahana amin'izany rehetra izany dia amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny siansa, politika, toekarena, sns.
Fahasarotana rehefa manapa-kevitra
Ity olana ity rehefa manapa-kevitra momba izay mameno ny asa sy ny fahasahiranana heveriko fa nasehontsika rehetra tamin'ny resadresaka nataontsika tamin'ny fianakaviana sy ny namana dia hita ao amin'ireo sombin-javatra roa ireo.
Ny fiaraha-monina dia nantsoina hoe "fanavahana fahita" ny fizotrany, rehefa mivoatra ny sivilizasiôna, izay nisy "zava-misy ara-tsosialy tanteraka", araka ny niantsoan'i Marcel Mauss azy, dia misy sehatra sy rafitra ara-tsosialy samihafa izao, samy manana ny lojikany manokana izy ireo: ny toekarena, ny kolontsaina, ny fahasalamana, ny lalàna, ny fanabeazana ... Ny fiarahamonina dia fomba fijery tsy mifanaraka mifanaraka aminy; raha ny fahitana azy ara-toekarena dia olan'ny tsy fahampiana izao tontolo izao; raha ny fahitana azy ara-politika dia zavatra tsy maintsy arindra miaraka ...
Ny politika dia ny fiezahana hamoaka an'io fahasamihafana fomba fijery io. Pierre Bourdieu dia namaritra ny Fanjakana ho "fomba fijery amin'ny fomba fijery" ary nanambara fa tsy azo atao intsony io fanamarihana manokana io noho ny fahasarotana amin'ny famaritana ny soa iraisana amin'ny haavon'ny fiarahamonina iray manontolo.
Misy zavatra mitovy amin'izany mitranga amin'ny fanapahan-kevitra izay misy fiatraikany amin'ny taranaka samihafa. Misy fiantraikany bebe kokoa amin'ny zokiolona ny fisotroan-dronono raha misy fiatraikany amin'ny tanora ny fikolokoloana ny tontolo iainana.
Ao amin'ny fiarahamonina antitra, ny be antitra dia manome tsindry bebe kokoa amin'ny governemanta satria manan-danja kokoa ny vatony. Mbola misy maro hafa.
Fanapahan-kevitra maro no manakantsakana ny taranaka maro, ny tsara ho an'ny iray dia tsy dia tsara loatra ho an'ny iray hafa ary sarotra be ny mandanjalanja ny fandanjana hitantanana ny fanapahan-kevitra tsara.
Demokrasia amin'ny fotoanan'ny areti-mandringana
Ny fampitsaharana ny fampahalalana dia tsy fampisehoana hery fa fitadiavana ireo fahalemena amin'ny ho avy. Aza afangaro amin'ny angona ny angona.
Matetika aho rehefa miresaka momba ny demokrasia no tadidiko ny tsikera / naoty momba Ny sandan'ny demokrasia.
Izahay dia mitaky amin'i Eropa izay tsy azony omena. Tsy manana fahaiza-manao ara-pahasalamana i Eoropa satria ireo firenena mpikambana dia tsy te hanome azy ireo ary ankehitriny dia tsy vonona ny hihetsika izany.
Ireo fizarana misaraka ireo dia mety hanjary tsy misy dikany. Fanamarihana tsotra raisiko ho tadidiko izy ireo, fa amin'ny asa manontolo dia fiantsoana fiaraha-miasa eo amin'ny firenena, vondrona, siansa, sehatra. Taratra hitazomana antsika ny maha-zava-dehibe ny antonony amin'ny politika, ny fikatsahana ny soa ho an'ny olom-pirenena ary ny fahasarotana atrehany eo amin'ny fiaraha-monina sarotra be toa ny ankehitriny.
Raha liana ianao dia afaka mividy azy eto
2 Fahasarotana rehefa manapa-kevitra
3 Krizy iraisana
4 Demokrasia amin'ny fotoanan'ny areti-mandringana